गौतम बुद्व क्रिकेट मैदानको निर्माण कार्य अगाडि बढाऔं « Aarthik Sanjal गौतम बुद्व क्रिकेट मैदानको निर्माण कार्य अगाडि बढाऔं – Aarthik Sanjal
म आफ्नो गच्छे अनुसार ५ हजारसम्म दिन सक्छु । यो वा त्यो कुनै पनि बहानामा विकास कार्य नरोकौं । चितवन भरतपुरको निर्माणधिन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माणका लागि धुर्मुस सुन्तलीलाई मेरो तर्फबाट म रु. ५ हजारसम्म उपलब्ध गराउने छु । तपाईं पनि सकेको सहयोग गर्नुहोस् । धुर्मुस सुन्तली किन रुँदै नागरिकको घरआँगनमा जानु पर्यो ? किनकि नेपालको दुई तिहाई उन्मुख कम्युनिष्ट सरकार निकम्मा भयो ।
यो र यस्ता विकास कार्य गर्नु भनेर तपाईं हामीले यो देशका कम्युनिष्टलाई दुई तिहाइको जनादेश दियौं तर ब्रह्मलुट गर्दै सत्तामा रहनका लागि मात्र हैन आफना साला सम्धी, छोरी ज्वाई सासु–ससुरा, नातागोता, झोले, चम्चेलाई पद, पैसा र प्रतिष्ठा दिलाउनका लागि यिनले आपसमा लडेर ३ वर्ष बिताए । देश र नागरिकका लागि सिन्को भाँचेनन् । एउटा पनि देखिने र सम्झने खालको विकास कार्य गरेनन् ।
अहिले पनि केपी शर्मा ओली सरकारले जिम्मा लिएर यो रंगशाला बनाए हुने हो तर यिनलाई सत्ता टिकाउनका लागि सांसदको अंक गणित मिलाउन नै भ्याइ नभ्याइ छ । उनका मन्त्री र कर्मचारी यही मौकामा देश लुट्न व्यस्त छन् भने उता मेयर रेणु दाहालका बाबु सुप्रिमो प्रचण्डको स्थिति पनि ओलीको भन्दा फरक छैन ।
ओली ढाल्नुभन्दा उनको जीवनमा अहिले अर्को कुनै लक्ष्य नै छैन । जसरी हुन्छ सरकार र पार्टीबाट ओलीलाई हटाएर आफू एकल अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री हुने अर्जुन दृष्टि मात्र छ । अब यस देशका पुराना पार्टी र संस्थाबाट कुनै गौरवलाग्दो काम हुनेवाला देखिदैन ।
आश्चर्य लाग्दो कुरा यिनीहरु बनाउनभन्दा भत्काउनमा तर्क र बुद्वि खर्च गर्छन् र गरिरहेका छन् । इतिहासको ७० वर्षमा नगरेको काम यिनीहरुले अब पनि गर्नेवाला छैनन् । त्यसैले हामी सबै सचेत नेपाली अब जाग्नु पर्ने दिन आएको छ । अब देश हामीले नै बनाउनु पर्छ ।
यो गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला किन पनि बन्नु पर्छ भने यो नागरिकस्तरबाट शुरु भएको काम हो र यो काम अधुरो भयो भने नागरिकको विश्वास यस देशका नेताबाट भागे जस्तो हामी नागरिकबाट पनि भाग्छ । यस देशमा केही हुन्छ भन्ने संभावनाको संचार गर्न र आशा बचाइराख्न पनि धुर्मु–ससुन्तलीले शुरु गरेको यस कामलाई हामी सारा नेपालीले आफ्नो नासो ठानेर सम्पन्न गर्नुपर्छ । यो गौतम बुद्ध क्रिकेट रंगशाला बन्नै पर्छ ।
तपाई हामी सबैले दिनको केवल १ रुपैयाँभन्दा कम पैसा दिँदा यो नेपालीको लागि गौरवको परियोजना बन्छ भने किन नदिनेरु अनि किन नबनाउने रु कतिले यसलाई माओवादी हाइहाइ हुने काम भनेर पनि असफल गराउन खोजेका होलान्, कतिले चितवनमा बन्ने रंगशाला पूर्व र पश्चिम अनि हिमाल र पहाडका हामीलाई के काम भन्ने पनि ठानेको हुन सक्छन् ।
तर अब हामीले यस्तो संकीर्णताबाट माथि उठ्न जरुरी छ । किनकि यो रंगशाला केवल रंगशाला हैन यो आशा पनि हो । यदि यो रंगशाला बनेन भने नेपालमा राष्ट्रिय गौरवका परियोजना वर्षौसम्म पनि या त बन्दै बन्दैनन वा बने पनि विरलै बन्छन् ।
सबैभन्दा खतरनाक कुरा नेपालीको मनबाट आशा मर्छ । धेरै कुरा होस नहोस् तथापि हामीले कुनै पनि हालतमा आशा चाहिं मर्न दिनु हुँदैन । नेपालीको मनमा आशालाई जिउँदो राख्न पनि यो रंगशाला बन्नुपर्छ,बन्नै पर्छ । यसमा हामी सबैले धुर्मुस सुन्तलीको होस्टेमा हैसे गर्नुपर्छ ।
अझ राम्रो हुन्थ्यो यदि सारा नेपालीलाई यसमा शेयर हाल्ने वातावरण बनाउन सके । के तपाई चाहनु हुन्छ यो गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला बनोस् ? चाहनु हुन्छ सहयोग गर्नुहोस। किनकि हामी निर्माणको युगमा छौं ।
नेपालमा हुने कुनै पनि विकास निर्माण कार्य रोक्नका लागि सुनियोजित रुपमा आवाज उठ्ने गरेको छ । यो सब विदेशीले नेपाललाई अहिलेको अवस्थाबाट माथि उठ्न नदिने सुनियोजित षडयन्त्र अन्तर्गत भएको हुन सक्छ। त्यसैले यो वा त्यो बहानामा चितवनको रंगशाला पनि रोक्न खोजिँदैछ ।
चाहे त्यो कलेजको जग्गा भनेर होस् या धुर्मुससुन्तलीले कमाउनका लागि गरेका हुन् भनेर नै किन नहोस् । देश बनाउने अवसर सधैं पाइँदैन । त्यसैले मुठ्ठी खोलौं र सकेको सहयोग गरौं । हामीले नगरे कसले गर्छ रु अहिले नगरे कहिले गर्ने रु त्यसै सबैले सहयोग गरौं,राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट मैदान तयार गरौं।
९ चैत्र २०७७, सोमबार २१:२७
विश्वजल दिवस,पानी र मानव जीवन
८ चैत्र २०७७, आईतवार ०९:००
मेलम्चीको सफलता र पाठ